Maitiro ekudzosera kuIOS 13 mushure mekuisa iyo iOS 13.1 beta | IPhone nhau
Maitiro ekudzosera kuIOS 13 mushure mekuisa iyo iOS 13.1 beta
Vhiki rapfuura, vakomana veCupertino vakatanga iyo iOS 13.1 yekutanga beta, kufamba uko kusvikira zvino kwanga kusati kwaitwa mumakore apfuura uye izvo zvaireva izvo vhezheni yekupedzisira yeIOS 13 yakagadzirira kuburitswa maminetsi mushure mekuguma kwechiitiko cheiyo nyowani iPhone 2019 renji.
Ichi chiitiko chichaitwa munaGunyana 10. Kana iwe uine otomatiki zvigadziriso zvakagadziriswa, yako terminal ichave yakagadziridzwa kune nyowani beta yeIOS 13.1, saka kana iyo yekupedzisira vhezheni yeIOS 13 yaburitswa, iwe hauzove nemukana wekutora iyo vhezheni. Kana uchida kuderera uye dzokera kuIOS 13 Tinokuratidza matanho ekutevera.
1 Maitiro ekudzikisira kuenda kuIOS 13 kubva kuIOS 13.1
2 Maitiro ekusiya iyo iOS 13 beta chirongwa
3 Iko iOS 13 beta yakakosha kunamatira nayo?
Maitiro ekudzikisira kuenda kuIOS 13 kubva kuIOS 13.1
Kutanga, iwe unofanirwa kufunga kaviri kana uchiita izvi maitiro, sezvo chero yekudzikisira maitiro, kudzokera kune yapfuura vhezheni, inoda izvozvo bvisa zvese zvirimo kubva pachigadzirwa chedu. Zvakare, kana uchidzokera kune yakapfuura vhezheni, kana isu tine backup yeiyo yepamusoro vhezheni, hatizokwanisi kuidzosa pane yedu kifaa.
Kana iwe uri pachena kuti iwe unoda kuita iyi maitiro, heano matanho ekutevera. Chekutanga pane zvese kuita kopi yezvose zvemukati zvaunoda kuchengetedza. Kana iwe wakamisa iyo backup muICloud Zvinopfuura zvakakwana.
Chekutanga pane zvese, isu tinofanirwa kutarisa kuti isu takaisa iyo yazvino vhezheni yeTunes pakombuta yedu.
Tevere, tinofanira batanidza yedu iPhone, kana iPad, kuchikwata chedu kuburikidza netambo.
Tevere isu tinofanirwa kumisikidza iyo yekudzoreredza modhi pane yedu iPhone:
Zve iPhone kana iPad ine Chiso ID: Dhinda uye nekukurumidza kuburitsa Vhoriyamu kumusoro bhatani. Dhinda uye nekukurumidza kusunungura Vhoriyamu Pasi bhatani. Dhinda uye bata bhatani repamusoro kudzamara mudziyo watanga kutangazve. Dhinda uye ubatise bhatani repamusoro kudzamara mudziyo wapinda pakupora mode
iPhone 8 / 8 Plus: Dhinda uye nekukurumidza kuburitsa Vhoriyamu kumusoro bhatani. Dhinda uye nekukurumidza kusunungura Vhoriyamu Pasi bhatani. Wobva wadzvanya uye bata bhatani repadivi kusvikira iro rekudzosa mode chidzitiro chaonekwa.
iPhone 7/7 Plus / iPod touch (chizvarwa chechinomwe): Dhinda uye ubatisise Kurara uye Vhoriyamu Pasi mabhatani panguva imwe chete. Usasunungure mabhatani paunoona Apple logo. Dhinda uye ubatisise mabhatani ese kusvika iwe waona iyo yekudzosa mode mode
iPhone 6s, iPad ine bhatani repanyama uye shanduro dzekare: Dhinda uye bata bhatani rekurara uye bhatani repamba. Hatifanire kumira kudzvanya mabhatani ese ari maviri kudzamara yaonekwa pachiratidziro cheichi mudziyo mune yekudzosa maitiro.
Panguva iyoyo, iTunes ichaona kuti chishandiso chedu chiri kutadza kushanda kutikurudzira kuti tidzorere mudziyo wedu. Kudzorera mudziyo wedu kunofunga kudzima zvese zvirimo, zvemukati izvo isu tichazongokwanisa kudzoreredza kana tagadzira backup kopi neiyo imwechete vhezheni yeIOS yatichaisa.
Kudzvanya pakudzorera, iTunes zvinobva zvango dhawunirodha yazvino vhezheni yeIOS parizvino inowanikwa pamaseva eApple, iOS 12.4.1 uye ichaenderera nekuiswa kwayo.
Kana isu tikapfuura nenzira yekuwana iyo yeruzhinji betas zvakare, tichaona kuti Apple inotipa iyo yechipiri beta yeIOS 13.1, saka tichava nedambudziko rakafanana zvakare. Izvi zvinotimanikidza kutsvaga internet kune mamwe akasiyana IPSWs eakasiyana iOS 13 betas. IPSW yeiyo akasiyana iOS 13 betas iyo Apple yakaburitsa. Yekupedzisira yaive nhamba 8, isati yaburitswa iOS 13.1 beta 1.
Maitiro ekusiya iyo iOS 13 beta chirongwa
Siya iyo beta chirongwa kuitira kuti mudziyo wedu tevera iyo Apple yekuvandudza kutenderera Iyo yakapusa maitiro uye ichatibvumidza isu kugara tichifarira yakagadzikana vhezheni yeIOS. Iwo mabetas ndiwo mabheta, bvunzo shanduro dzisati dzaburitswa vhezheni yekupedzisira, saka mashandiro avo, dzimwe nguva, haagutsi zvakanyanya, saka hazvimbofi zvakakumbirwa kuzviisa pane chishandiso chatichazoshandisa mubasa redu, Muzuva nhasi…
Chekutanga pane zvese tinokwira kumusoro Zvirongwa> Zvakajairika.
Tevere, tinya pane Profiles. Mukati meichi chikamu, ese ma profiles atakaisa pane yedu kifaa anozoratidzwa.
Isu tinosarudza iyo iOS 13 uye tinya pa Delete profile.
Kuona kuti isu tiri varidzi chaivo veiyo terminal, iOS isu inokumbira kodhi ye iPhone yedu.
Tevere, iwe unotibvunza isu Ngatisimbisei kuti tinoda kudzima chimiro.
Kana tangobaya Delete, tichaona kuti chimiro cheiyo iOS betas chanyangarika kubva kune yedu terminal uye chete iyo yataive takaisa ndiyo inoratidzwa kana zvirizvo.
Kana tisina imwe nhoroondo yakaiswa pane yedu kifaa, iyo sarudzo yeprofile muZvirongwa> General haizoonekwe.
Iko iOS 13 beta yakakosha kunamatira nayo?
Pano zvese zvinoenderana nechishuwo chauinacho edza nhau idzo Apple ichaunza mune inoteedzana iOS inogadziridza. Pakutanga, zhinji dzenhau dzakapihwa muWWDC yekupedzisira dzichasvika neyekupedzisira vhezheni yeIOS 13, kusiyana nemakore apfuura apo mamwe emabasa akaunzwa muWWDC inoenderana, haana kusvika kusvika rinenge gore gare gare.
Kana iwe uchida kuti yako terminal ishande nemazvo, pasina kuunza matambudziko ebhatiri, kunetsekana kwekushandisa, kumisikidza kusatarisika kana chero rimwe dambudziko rine chekuita nekushandiswa kwemabheta, haufanire kushandisa chirongwa ichi. Ndokunge kana, mumakore maviri apfuura, iyo iOS betas iri kupa kugadzikana kwehurongwa izvo zvataisazombofungidzira kare. Kudzikama uku kwave kuri kwechimwe chikonzero nei Apple yakafunga kuvhura chirongwa che beta kumushandisi wekupedzisira.
Iyo yeruzhinji beta chirongwa inobvumidza iyo Cupertino kambani gadzirisa nekukurumidza matambudziko angaburitswa neshanduro dzeIOS pamusika. Neiyi nzira, iyo beta chikamu cheinotevera gadziriso inogara iine ipfupi nguva munguva kupfuura mumakore apfuura.
Kuti uise mabetas akasiyana ayo Apple anotangisa ezvimwe zvinotevera zveIOS, zvinofanirwa kunge zviine chitupa chinoenderana cheApple, kungave iyo yakaunzwa kune vanogadzira kana kune avo vari chikamu cheveruzhinji beta chirongwa. Chero bedzi isu tiine chero ezvitifiketi zvakaiswa, Isu tinogamuchira akasiyana iOS betas ayo Apple anoburitsa.
Kana isu tichida kurega kugamuchira mabheta, chinhu chekutanga chatinofanira kuita ndeche bvisa chitupa icho kubva pachigadzirwa chedu. Nokubvisa chitupa ichocho, chishandiso chedu chinodzokera kune yakajairwa kutenderera kwekuvandudzwa, ndokuti, sezvo Apple inoburitsa vhezheni dzekupedzisira. Kana panguva yekudzima chitupa vhezheni yekupedzisira yaburitswa uye iwe ukasagashira inoenderana chiziviso, imhaka yekuti iwe unotova neshanduro imwechete iyo ichangoburitswa yakaiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 13 » Maitiro ekudzosera kuIOS 13 mushure mekuisa iyo iOS 13.1 beta
Kuzivikanwa kweBiometric pane tambo yeApple Watch?
Twitter inodzivisa kwenguva pfupi kugona kutumira ma tweets kuburikidza neSMS